YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, July 24
သတင်း-နိဉ္စရာ July 23, 2012 at 7:21 pm
လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ် အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လူမျိုးရေး ပတိပက္ခ အတွင်း လူပေါင်း ၁၈ ဦးသေဆုံး ပြီးနောက် ဝေးကွာလွန်းတဲ့ အာသံပြည်နယ် အတွင်းက ထောင်ပေါင်း မြောက်များစွာသော လူတွေဟာ အိုးအိမ်တွေကို စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးနေကြတယ်လို့ ဒီကနေ့ အေပီ သတင်း တစ်ပုဒ်မှာ ဖေါ်ပြ ထားပါတယ်။
အခုအချိန်ထိ ပျောက်ဆုံးနေသူ ၁၀ ဦးရှိကြောင်းနဲ့ တိုက်ခိုက်မူတွေဟာ မြေယာပိုင်ဆိုင်မူ အငြင်းပွားရာကနေ ဌာနေ တိုင်းရင်းသား ဘိုရို လူမျိုးတွေနဲ့ ဘင်္ဂလီ မွတ်ဆလင် အခြေချ နေထိုင်သူတွေ အကြားမှာ ဖြစ်ပွားတာ ဖြစ်တယ်လို့ အိန္ဒိယ အာသံပြည်နယ် ပုလိပ်မင်းကြီး J.N. Choudhury ကို ကိုးကားပြီး သတင်းက ဆိုပါတယ်။
အခု အဓိဂရုဏ်း ဖြစ်နေတဲ့ နေရာဟာ အာသံပြည်နယ် အနောက်ပိုင်း ကိုကြာဂျဟာ ခရိုင် (Kokrajhar district) အတွင်းမှာ ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အခုအခါ အဓိဂရုဏ်းဟာ အနီးအနားက ခရိုင်နှစ်ခုမှာ ဆက်လက် ကူးစက် ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဓိဂရုဏ်းအတွင်း ဓါးခုတ် ဒဏ်ရာတွေနဲ့ သေဆုံးသွားသူတွေရဲ့ အလောင်းတွေကို တောထဲ နေရာ တချို့နဲ့ ကားလမ်း ဘေး၊ မြစ်ကမ်းဘေးတွေမှာ ရဲတွေက ရှာဖွေတွေ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အခုအခါ အိုးအိမ်တွေကို စွန့်ခွာထွက်ပြေးလာကြတဲ့ လူပေါင်း ၃၀၀၀၀ ခန့်ရှိပြီး သူတို့တွေ အတွက် ကယ်ဆယ်ရေး စခန်း (၆) ခုခန့်ကို ဖွင့်လှစ် ထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အခုအခါ အိန္ဒိယ အစိုးရက အဲဒီ ဒေသမှာ ကာဖျူး ထုတ်လိုက်ပြီး အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ အဲဒီဒေသကို စစ်တပ်တွေ စေလွှတ်ထားလိုက်ပြီ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အိန္ဒိယ နိုင်ငံ အာသံပြည်နယ်က ဌာနေ တိုင်းရင်းသား ဘိုရို လူမျိုးတွေနဲ့ ဘင်္ဂလီ အခြေချနေထိုင်သူတွေအကြား အပြန်အလှန် ကွက်တိ ကွက်ကျား တိုက်ခိုက်မူတွေနဲ့ အတူ အိမ်မီးရှို့မူတွေကတော့ ၁၉၉၀ ခုနှစ်ကတည်းက ဖြစ်ပွားနေခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
မြေယာ ခိုးယူ ပိုင်ဆိုင်မူ အငြင်းပွားမူတွေကြောင့် ဒေသခံ ဘိုရိုတွေနဲ့ ထောင်ပေါင်းများစွာသော အရှေ့ပါကိစ္စတန် လက်ထက် ( ၁၉၇၁ ခုနှစ် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ လွတ်လပ်ရေး မတိုင်မီ) ကတည်းက အခြေချနေထိုင်သူ ဘင်္ဂလီတွေအကြားမှာ အမြဲတန်းလိုလို ဆူပွက်မူတွေနဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
နောက်သတင်း တစ်ခုမှာတော့ မွတ်ဆလင် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်နှစ်ဦး တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့ နောက်မှာ မွတ်ဆလင်တွေက ဘိုရို လွတ်မြောက်ရေး ကျားအဖွဲ့က လူ ၄ ဦးကို ပြန်လည် တိုက်ခိုက်ရာကနေ အခု အဓိဂရုဏ်း စတင် ဖြစ်ပွားလာတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/24/20120အကြံပြုခြင်း
by အေးနိုင် July 24, 2012(photo-MRTV4)
မြန်မာနိုင်ငံဘက်က တင်ပို့နေတဲ့ဆန်ကို တရုတ်ဘက်အခမ်းက အခုရက်ပိုင်းအတွင်း တင်းကျပ်စိစစ်လိုက်တဲ့အတွက် ဆန်တင်ပို့မှု ရပ်ဆိုင်းရေတာ့မယ့် အခြေအနေ ဆိုက်နေတယ်လို့ ဆန်စပါးလုပ်ငန်း အသိုင်းအ၀ိုင်းက ပြောပါတယ်။
နယ်စပ်ကနေ ဆန်တင်သွင်းနေတာကို တရုတ်ဘက်က ရက်ပိုင်းအတွင်း တင်းကျပ်လိုက်တဲ့အတွက် မြန်မာ့ဆန်တင်ပို့မှု ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရတာပါ။
နဂိုကတည်းက မြန်မာ့ဆန်ဟာ အရည်အသွေးနိမ့်လို့ဆိုပြီး တရုတ်နိုင်ငံက တရားဝင်ဝယ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မှောင်ခိုလမ်းကြောင်းက ပို့နေရတာဖြစ်ပြီး အခု တင်းကျပ်လိုက်တာပါ။ မြန်မာ့ဆန်တင်ပို့မှုကို တရုတ်ရဲ့ တင်းကျပ်မှုဟာ မြန်မာ့အသားတင်ပို့မှုကို ပိတ်ပင်ခဲ့ပြီး ရက်ပိုင်းအကြာမှာ ဆောင်ရွက်ချက်အသစ် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆန်တင်ပို့မှု တင်းကျပ်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်း ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဒေါက်တာစိုးထွန်းက ခုလို ပြောပါတယ်။
“နဂိုကတည်းက တရားမ၀င်တာ အခုက ၀န်ထမ်းတွေကို သူတို့ပို စည်းကမ်းကျပ်လိုက်တယ် ထင်တယ်။ ဟိုဘက်မှာ ရောင်းရ ၀ယ်ရခက်နေတယ် ကြားတယ်။ အဓိကပြဿနာက သယ်ယူပို့ဆောင် စရိတ်ကြီးတော့ ဆန်တွေသွားပုံမှာပေါ့။ ပို့ထားပြီးသား ဆန်တွေက ဒီဘက်ပြန်သယ်ရခက်မယ်။ သယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ်က တန်ဖိုးရဲ့ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနေတာ။”
မြန်မာပြည်ကဆန်ကို တရုတ်ဘက်မှာ ဆန်ခေါက်ဆွဲ၊ ဆန်ကြာဇံလို အစာထုတ်လုပ်မှုနဲ့ ဆန်အရက်ချက်တာတွေမှာ သုံးလေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဧပြီလကနေ မပိတ်ခင်အထိ ၁ ရက်ကို မြန်မာဆန် မက်ထရစ်တန်ချိန် ၂၀၀၀ နဲ့ ၂၅၀၀ အကြား တင်ပို့နေရာက ရပ်တန့်သွားတာလို့ ဒေါက်တာစိုးထွန်းက ပြောပါတယ်။
မြန်မာဆန်ကုန်သည်တွေအဖို့ ရန်ကုန်ကနေ မူဆယ်၊ မူဆယ်ကနေ ကျယ်ဂေါင်ကို ဆန်မက်ထရစ် ၁ တန်ကို သယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ် ဒေါ်လာ ၁၂၀ လောက်ကျသင့်ခံ ပို့ဆောင်ထားရာက အခုလိုတင်းကျပ်လိုက်တော့ သိုလှောင်စရိတ်တက်တာနဲ့ ပျက်စီးကုန်မှာတွေကြောင့် ငွေကြေးနစ်နာမှုတွေ ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
မြန်မာ့ဆန် ပြည်ပနိုင်ငံတွေဆီ တင်ပို့နိုင်ရေးကိစ္စကို အစိုးရချင်း စကားပြောဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်း ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဒေါက်တာစိုးထွန်းက ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ အနေနဲ့ကေတာ့ ဟိုတခေါက် ညီလာခံမှာ တွေ့တုန်းကလည်း စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးကို တင်ပြထားတယ်လေ။ ဒါကေတာ့ နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရချင်း ညှိနှိုင်းပြီး စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးအနေနဲ့ ညှိနှိုင်းပေးဖို့ပေါ့နော်။ သူတို့ လက်မှတ်ထိုးပေးမှ ရမှာလေ။ ကျနော်တို့ အသင်းအနေနဲ့ လုပ်လို့မရဘူး။ ကျနော်တို့ မြန်မာဆန်ကို သူတို့ တရားဝင် လက်ခံပေးဖို့ပေါ့နော်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျေန်ာတို့ တိုင်းပြည်က သူတို့ပစ္စည်းတွေအများကြီးကို လက်ခံပြီး သုံးစွဲနေတာလေ။ ကျနော်တို့ ထွက်ကုန်ပစ္စည်းက ဘာမှ ရှိတာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ တရားဝင် လက်ခံပေးဖို့ပေါ့။”
မူဆယ်ဒေသခံတွေနဲ့ မူဆယ် ၁၀၅ မိုင်ဂိတ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးက ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးခန်းကလည်း လုံးဝတင်ပို့မှုရပ်တန့်တာမျိုးတော့ မဟုတ်သေးဘဲ ဆန်ကားတွေလာတာ တွေ့နေရဆဲပဲလို့ ပြောပါတယ်။
အရည်အေသွးနိမ့်တဲ့ မြန်မာ့ဆန်ကို ပြည်ပ တင်ပို့ကုန် မျက်နှာပန်းလှေအာင် အရည်သွေးမြှင့်ဖို့ ကြိုးပမ်းကြရမယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးကုန်သည်များအသင်း အေထွေထွအတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာမျိုးအောင်ကျော်က ပြောပါတယ်။
“နိမ့်တဲ့အခါကျေတာ့ ဈေးကွက်မှာလည်း ဈေးကောင်းကောင်းမရဘူး။ ကျေန်ာတို့စက်တွေမှာကလည်း နှစ်ပေါင်းများစွာ ၁၉၅၀၊ ၁၉၆၀ ထဲက သိပ်အများကြီး တိုးတက်မလာသေးဘူးလေ။ နည်းနည်းပိုကောင်းတဲ့ စက်တွေထည့်လာတယ် ဆိုပေမယ့် ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများက နဂိုအေနအထားအတိုင်းပဲ ရှိသေးတယ်။”
တရုတ်နယ်စပ်မှာ ဆန်တင်ပို့မှုကြောင့် နစ်နာရမယ့်သူတွေဟာ တပိုင်တနိုင် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်ငယ်တွေလား ဒါမှမဟုတ် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူတွေနဲ့နီးစပ်တဲ့ ခရိုနီ စီးပွားရေးသမားတွေ နစ်နာတာလားဆိုတာ သဲသဲကွဲကွဲ မသိရေသးပါဘူး။
သာယာဝတီနယ်က လယ်သမားတွေကို မေးကြည့်ရာမှာတော့ လက်ရှိ လယ်သမားလက်ထဲမှာ စပါးမရှိတော့တဲ့အချိန် စပါးကုန်သည်တွေက ဈေးမြှင့်ပေးလာဝယ်နေပေမယ့် ပဲဈေးတွေထိုးကျတဲ့အတွက် လယ်သမားတွေ ဘာစိုက်ပျိုးရမယ်ဆိုတာ တွက်ချက်ရ ခက်ခဲနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
Min Ko Aung's photo.
about an hour ago by-EMG
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/24/2012 1 အကြံပြုခြင်း
ရိုဟင်ဂျာအရေးနှင့်ပတ်သက်၍အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီသစ်ကို တယ်လီဖုန်းဆက် ခြိမ်းခြောက်
''တယ်လီဖုန်းဆက်တာလေး ကြိမ်ရှိသွားပြီ၊ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာမရှိဘူးလို့ ပြောတာကို လက်မခံနိုင်ဘူး'' ဟု ဖုန်းဆက်၍ ပြောကြားခဲ့ကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီပါတီသစ်၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဦးသိန်းညွန့်၏သား ကိုခိုင်မင်းက ပြောသည်။
ကျင်းပနေသည့် စတုတ္ထအ ကြိမ်မြောက်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနှင့် ပတ် သက်၍ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းညွန့်က တိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိုးတွင် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးမပါဝင် ကြောင်းနှင့် လူ့အခွင့်အရေးကို အကြောင်းပြ၍ ကဗျာဆန်၍မရကြောင်း၊ ယခုကိစ္စမှာ အမျိုးသားရေးကိစ္စဖြစ်ကြောင်း ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ သည်။
ယင်းကဲ့သို့ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ခြိမ်းခြောက်မှုများ ပြုလုပ်လာခြင်းဖြစ် နိုင်ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီသစ်မှ ပါတီဝင်များက ခန့်မှန်း ပြောဆိုကြသည်။
''ကျွန်တော်တို့နဲ့ အငြင်းအခုံ ဖြစ်ရတယ်၊ ပါတီရဲ့မူဝါဒက ခုလို ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ပါတီရှေ့မှာ ဆန္ဒလာပြမယ်'' လို့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ကလည်း ထပ်မံဖုန်း ဆက်ပြီးပြောကြားကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်၍ ကူညီထောက်ပံ့ရေး ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီသစ်ကို အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ လာရောက်လှူ ဒါန်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း ပါတီ က လက်မခံဘဲ အစိုးရအဖွဲ့ကိုသာ တိုက်ရိုက်လှူဒါန်းရန် ပြန်လည်ပြော ကြားခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်ရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများ၏ အကြောင်းကို ရေးသားထားသော စာအုပ် ၇ အုပ်ကိုလည်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီပါတီသစ်ကို လာရောက် ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း ပါတီဝင်များက ပြော သည်။
''အခုဖုန်းဆက်ပြီးခြိမ်းခြောက် တာနဲ့ပတ်သက်လို့ သက်ဆိုင်ရာအ ဖွဲ့အစည်းတွေကို အကြောင်းကြားပြီး သွားပြီ၊ သူတို့သိချင်တာတွေကိုလည်း လာမေးလို့ ဖြေပြီးသွားပြီ၊ ကျွန်တော် တို့ပါတီရဲ့ မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး လွှတ်တော်တွင်းမှာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ဆက်ပြီး တော့ ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးသွားဦးမှာ ပါ''ဟု ပါတီတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကThe Messenger ဂျာနယ်သို့ ပြောသည်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်တင်ပေးခဲ့သော တာမွေဒီချုပ်ဆိုင်းပုဒ်ကို ရိုက်ခွဲခဲ့သူအား ပြန်လည်ကျေအေး...
by Myit Makha Mediagroup on 24 Jul, 2012
တာမွေမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဆိုင်းဘုတ်အား ခဲနှင့်ရိုက်ခွဲခဲ့သော ကာယကံရှင်အား ဒီချုပ် (NLD)က တရားစွဲဆိုခဲ့သည့်အမှုအား ယနေ့ဇူလိုင်လ(၂၄)ရက်နေ့တွင် ကျေအေးလိုက်ပြီဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ဆိုင်းဘုတ်ကို ဇွန်လ ( ၅ )ရက်နေ့နံနက် (၇) နာရီတွင် ကိုသီဟလှိုင်မှ ခဲနှင့်ရိုက်ခွဲလိုက်ခြင်းဖြစ်ကာ NLD က တာမွေရဲစခန်းတွင် သွားရောက်တိုင်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“သူရဲ့တောင်းပန်မှု၊ ၀န်ချမှုအတွက် ကျွန်တော်တို့လူကြီးများက ပြည်သူတစ်ယောက်ဝန်ချမှုအတွက် ပြည်သူ တွေအပေါ် ဘယ်လိုကူညီရမလ၊ဲ ပြည်တွေအတွက် ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတဲ အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လမ်းညွှန်မှုနဲ့ ကျေအေးပေးပါတယ်။ ဒီပြစ်မှုအပေါ်မှာလည်း ကျွန်တော်တို့ လက်ခံ ပါတယ်။” ဟု ဒီချုပ်ပါတီ တာမွေမြို့နယ် ဥက္ကဌ ဦးလှသိန်းက ပြောသည်။
ပြည်သူတစ်ယောက်ကို အကာကွယ်ပေးပြီး ပြည်သူတစ်ယောက် အလုပ်ပျက်မှာကို မလိုလားသည့်အတွက် ကျေအေးပေးလိုက်ကြောင်း ဥက္ကဌ ဦးလှသိန်းက ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
ဆိုင်းဘုတ်အား ခဲနှင့်ပစ်ပေါက်သူ ကိုသီဟလှိုင်အား တာမွေရဲစခန်းမှ အမှတ် ၅၈၁/၁၂ ပုဒ်မ ၄၂၇ (အကျိုးပျက်စီးမှု) နှင့်တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီး ဇူလိုင်လ (၂၆) ရက်နေ့ ရုံးချိန်းတွင် ၄င်းအမှုအား ကျေအေးရန် တရားရုံးတွင် ပြောဆိုမည်ဟု သိရသည်။
“ကျွန်တော်အမူးလွန်ပြီးဖြစ်သွားတာပါ။ ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော်တောင်ပစ်ခွဲလိုက်မှန်းမသိပါဘူး။ ရုံးအဖွဲ့ဝင်တွေကို ကျေနပ်အောင်တောင်းပန်ချင်လို့လာခဲ့ပါတယ်။ ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့တန်ဖိုးအတိုင်းလဲ ပြန်ပြီး လျော်ပေးပါမည်။”ဟု ကာယကံရှင် ကိုသီဟလှိုင်က ပြောသည်။
အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ ယင်းဆိုင်းဘုတ်သည် ဒေါက်တာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် လာရောက်တင် ပေးထားသဖြင့် မိမိတို့တန်ဖိုးထားသော ပစ္စည်းကို အရိုက်ခွဲခံလိုက်ရသည့်အတွက် စိတ်ထိခိုက်ပါကြောင်း NLD ပါတီဝင် ဦးစံတင်က ပြောသည်။
“ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ ဘာမှပြောစရာမရှိဘူး။ လူကြီးတွေက ကျေအေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။” ဟု တရားခံရှေ့နေ ဦးကျော်မိုးနိုင်က ပြောသည်။
ဆိုင်းဘုတ်တန်ဖိုးသည် ကျပ်ငွေ (၁ သိန်း ၄ သောင်း)ကို ကာယကံရှင်( တရားခံ) အနေနဲ့ လျော်ကြေးပေးရ သည်ဟု သဘောမထားသလို မိမိတို့အနေနှင့် လျော်ကြေးပေးသည်ဟု သဘောမထားပဲ ရန်ပုံငွေကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ကူညီသည်ဟုသဘောထားကာ ရန်ပုံငွေဖြတ်ပိုင်းပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း တာမွေမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ဦးလှသိန်း ကပြောသည်။
"Good Governance ၊ Clean Government အဆိုကို တပ်လှန့်ခြင်း။
by Yan Aung on Wednesday, July 25, 2012 at 1:25am ·
ဒီအဆိုဟာ ဘာ့ကြောင့်အရေးကြီးသလဲ လို့ ပြောရသလဲဆိုရင် Good and Clean ရည်မှန်းချက်ဟာ ...သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ခံယူချက် ဖြစ်သလို လွှတ်တော်သက်တမ်း တစ်နှစ်ကျော်အတွင်း ယခုထက်ထိ ထိုကဲ့သို့ အဆိုမျိုးကို ဘယ်လွှတ်တော်အမတ်ကမှ တိတိကျကျ တင်သွင်းဝံ့ခြင်း မရှိတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်..။
ယနေ့ ပြည်တွင်းမှာ ဖြစ်ပျက်နေသမျှ ဆိုးကျိုးကိစ္စတွေ အားလုံးနီးပါးက ယခင် စစ်အာဏာရှင် လက်ထက် ကတည်းက ဖြစ်လာတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေရှိခဲ့လို့ပါ..။
သိန်း ( ၁၀၀၀ ) လောက် လာဘ်စားပြီး လူကုန်ကူးကြသည့် ဗိုလ်မှူးဇေါ်လင်းဦးအဖွဲ့ဘယ်လဲဘာလဲ
ကျောက်ဖြူ အခြေစိုက် ဗိုလ်မှူးဝင်းခန့်ဦးစီးတဲ့ခမရ ( ၅၆၂ ) နဲ့ကျောက်နီမော်အခြေစိုက် ခမရ ( ၅၄၂ ) တို့မနေ့ က တပ်ချိန်းကြတယ် ။ တပ်ချိန်းတော့ မော်တော်ပေါ်မှာ မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင် ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေကို ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ် ။ အဲဒီ မိတ္ထိလာနဲ့ကျောက်ဖြူက မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင် ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေနဲ့ကျောက်နီမော်က ကုလားလူမျိုး ( ၃၂ ) ဦးဟာ မသီတာထွေး လူသတ်ခံရပြီးနောက် ရောက်ရှိလာသူများဖြစ်ပြီး အဓိက ကျောက်နီမော်မှာ လှုပ်ရှားကြိုးကိုင် နေသူများဖြစ်တယ် ။ အခုတော့ ဗိုလ်မှူးဇေါ်လင်းဦးက တပ်ပြောင်းတော့ပြီမို့သူတို့ လဲ အတူလိုက်ပါခွင့်ရဖို့သိန်း ( ၁၀၀၀ ) နဲ့ဈေးတည့်သွားပြီး အခုလို ဗိုလ်မှူးဝင်းခန့် တို့စီးလာတဲ့မော်တော်နဲ့ ဘဲ ကျောက်ဖြူကို ခေါ်လာခဲ့ ကြတယ်လို့သိရတယ် ။ သူတို့ ကို လုံခြုံရေးများချပေးထာကာ မနက်ဖန်ကျောက်ဖြူမြို့ကုလားချောင်းထိပ် ပလီသစ်မှာ လူစုနဲ့တွေ့ ဆုံစကားပြောခွင့်ပေးမယ်လို့သိရတယ် ။ ကျောက်ဖြူကတဆင့် ရန်ကုန်ကို လေယဉ်နဲ့လိုက်ပါပို့ ဆောင်မယ်ဆိုတာ သိရပြီး ဘာကြောင့်များ အခုလို လုံခြုံရေးတွေနဲ့လိုက်ပါပို့ ဆောင်နေသလဲဆိုတာ ပြည်သူတွေ မသိရဘူးလို့ပြောဆိုနေကြတယ် ။ ဗိုလ်မှူးဇေါ်လင်းဦးဟာ ကျောက်နီမော်မှာ ရခိုင်ကျောင်းဆရာမလေးတွေကို ကုလားကြောက်ရင် ငါနဲ့လာအိပ်လို့ အားမနာပ စကားတွေ ပြောပြီး ရိုင်းစိုင်းလွန်းသူ တယောက်ဖြစ်တယ်လို့သိရတယ် ။ ဒီလို သိန်း ( ၁၀၀၀ ) လာဘ်စားပြီး လုံခြုံရေးယူလို့သွားတာကို မကြေနပ်တဲ့အရာရှိတွေက တဆင့် ပေါက်ကြားလာတဲ့သတင်းတွေ ထွက်လာတာကို ဗိုလ်မှူးဝင်းခန့် တို့ က ကြားလို့မကြေနပ်ကြောင်းလဲ ကြားနေရတယ် ။ အခုလိုဘဲ ကုလားတွေကို လုံခြုံရေးတွေပေးပြီး နိုင်ငံတော် သမ္မတတယောက်လို ခေါ်ဆောင်လိုက်ပါ ပို့ နေကြတာဟာ လာဘ်စားရလို့ကြီးပွါးသွားတယ် ဆိုတာကို ဘာမှ မပြောလိုကြပေမဲ့စစ်တပ်သိက္ခာကျ လွန်းနေတယ်လို့ပြောဆိုနေကြတယ် ။
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဖြေရှင်းရမည့် ပြသနာ
ကျွန်တော်တို့လိုချင်သည်မှာ ဒီမိုကရေစီနှင့်လူ့ အခွင့်အရေးအပြည့်အ၀ ရရှိရေးဖြစ်သည် ။ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဖြစ်သည် ။
သို့ သော် မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဘာမျှမရရှိကြောင်း ပြည်တွင်းမှ ပေးပို့ သော သတင်းများကို ကိုးကားပြောဆိုကြသည် ။
ပြည်ပသတင်းများကို ကိုးကားပြောဆိုသောအခါ မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်များက ဂျီဟပ်စစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်ရန် ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ကြေညာနေသည်ဟု ဆိုတော့ ဤပြသနာမှာ စဉ်းစားစရာဖြစ်လာသည် ။
ကျွန်တော်မကြာခဏ ရေးနေပြောနေသည်မှာ ယင်းအချက်ဖြစ်သည် ။ တကယ်တမ်းလက်တွေ့ အကောင်ဖေါ်ရသည့်သူမှာ တည်ဆဲဥပဒေအရ အစိုးရဖြစ်သည် ။ ယခုဦးသိန်းစိန်ခေါင်းဆောင်သောအစိုးရသည် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဆိုသည်မှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး မဟုတ်ကြောင်း ပြောဆိုထားသည် ။ အစိုးရကလည်း နိုင်ငံတော်ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံ ဥပဒေမှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ( ၁၃၅ ) မျိုး ရှိသည်ဟု အတိအလင်း ကြေညာထားသည် ။ သို့ ဖြစ်၍ ဒေါသထွက်ခြင်း ၊ စိတ်လိုက်မန်ပါ ပြောဆိုခြင်းများ လိုအပ်လာလျှင် အစိုးရကိုသာ အပြစ်တင် ပြောဆိုကြရမည်မဟုတ်ပေဘူးလား ။ ရခိုင်လူမျိုးကြောင့် မွတ်ဆလင်ဘာသာင်ဘင်္ဂလီ လူမျိုးမှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး အဖြစ် အသိအမှတ် မပြုရဟု ဆိုသည်မှာ လုံးဝဥသုံ မှန်ကန်မှုမရှိချေ ။ အစိုးရက အသိအမှတ်ပြုလျှင် မည်သူမျှ ပြောပိုင်ခွင့်မရှိ ။
ယခုဖြစ်နေသည့်ပွဲမှာ ဒိုင်လူကြီး ရှိနေသည် ။ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးလှမင်းသည် ယခုဖြစ်နေသော ပြသနာမှာ စစ်တပ်မှ ဒိုင်လူကြီးပါလို့ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုသွားသည်ကို သတိရသည် ။ ကျွန်တော်တို့ သည် ဒိုင်လူကြီးရှိနေသော ပွဲမှာ တရားခံအဖြစ် ပါဝင်ကစား သင့်သလား ။
ယခုတောင်းဆိုခြင်းမှာ ပြည်တွင်း၌ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုများ ရှိနေသောကြောင့်ဟု ဆိုကာ အကြောင်းပြ တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်သည် ။ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်ဖို့ ရခိုင်မှာ မည်သည့်လက်နက်မှ မရှိ ။ ခံနေရသေးသည်ကို ပြည်ပက မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်တွေ မသိသေး ။ NGOs ဖြစ်သော -နယူးယောက်အခြေစိုက် -Amenesty International –AI ကို ဖြေရှင်းရန်လိုနေပါပြီ ။ မလေးရှားမှာ ပြုလုပ်မည့် အာဆီယံ ညီလာခံမှာ ဖြေရှင်းပြရမည်ဖြစ်သည် ။ ယင်းသို့မဆောင်ရွက်က အစိုးရ၏ လုပ်ရပ်သည် နောင်ကို သွေးချောင်းစီးစေရန်အတွက် အကွက်ဆင်နေခြင်းဟု ပြောရုံမှ တပါးအခြားမရှိ ။ ပါကစ္စတန်မှ လူ့ အခွင့်အရေးခေါင်းဆောင်-Ansa Burney-က ငိုနေသော ဒုက္ခရောက်နေသော သူကို တွေ့ ရန်လာမည်ဟု တနင်းလာနေ့ က ဗီဇါလျှောက်ယင်း ပြောဆိုထားသည် ။ ကဲ မည်သူများ ကိုယ့်အိမ်မှာ ငိုကြွေးနေရသနည်း ။
USDP ပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တာဝန်ခံဖြစ်သော ဦးအောင်သိန်းလင်းသည် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မှ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး အငြင်းပွားဖွယ်ရာ မဲရ လဒ်ဖြင့် အနိုင်ရခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အငြင်းပွားမှုမှာ ကြိုတင်မဲအများအပြားဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။ ထို့အပြင် ဦးအောင်သိန်းလင်းသည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်အဖြစ် တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီကာလအတွင်း မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက် လမ်းခင်းခြင်းများပြုလုပ်ရာ၌ ၎င်း သည် ပါတီငွေကြေးနှင့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်ငွေကြေးများကို ရောထွေးသုံးစွဲခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲဝေဖန်ခြင်းများကိုလည်း ခံခဲ့ရသူ ဖြစ်သည်။
အိန္ဒိယ အာသံပြည်နယ် ဒေသခံနှင့် အခြေချ ဘင်္ဂလီများ၏ အဓ...
ရိုဟင်ဂျာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး၏...
"Good Governance ၊ Clean Government အဆိုကို တပ်လှန...
သိန်း ( ၁၀၀၀ ) လောက် လာဘ်စားပြီး လူကုန်ကူးကြသည့် ဗ...